Glass Beveling Machine Factory - China Glass Beveling Machine Vagadziri uye vanotengesa
12 motors Italian bhora rinotakura beveling muchina PLC komputa
Iri girazi beveling muchina unoshandisa bhora rinotakura rekutakura system. Ndiyo chaiyo chaiyo uye inofamba yakatsiga uye yakadzikama. Yese inobata inoshandisa NSK inogadzirwa muJapan. Iyo yekumashure yekuendesa yemuchina iyi inogona kusimudza / kudzika kuti ishande akasiyana saizi girazi. Iyo PLC inodzorwa, ine inobata pani inoshanda sisitimu. sikirini anoratidza angled, bevel Upamhi, pasi ukobvu, zviri nyore kuti ishande. Mushini unoshandisa ABB chokurukisa, yekumhanyisa inverter system. Iine kushanda kwakanyanya kushanda uye kunyatsoita.
11 12 motors bhora rinotakura girazi beveling muchina PLC controller
Muchina uyu unogadzirirwa kugadzira bevel pane girazi diki (30x30mm) uye girazi hombe (3mx3m), inogona zvakare kuita 45 degree bevel kumucheto.
Iyo yekumberi yekufambisa njanji inogona kutamisirwa kumusoro uye pasi zvinoenderana negirazi saizi.
Muchina uyu unotora PLC kutonga uye opareta interface. Iyo Screen inogona kuratidza girazi ukobvu, bevel angle, bevel upamhi uye kumashure track track kukwirira.
Kumberi uye kumashure maConveyor anoshandisa bhora rinotakura conveyor, iro giya rekutyaira rinotyaira iro roller yepadenga rega.
9 mota girazi beveling muchina, PLC kudzora & yekubata skrini
Muchina uyu unoshandiswa kugadzira bevel pagirazi uye negirazi, iine peripheral dhayamondi vhiri rinogaya repazasi mucheto. Muchina uyu unotora PLC kutonga uye opareta interface. Iyo bevel upamhi uye kona inogona kumisikidzwa kuburikidza nePLC chaizvo chaizvo. Iyo pneumatic makorari mavhiri anoita kuti bevel rinyatso kupenya Pasi uye furemu yakagadzirwa nesimbi yakakandwa kuti ive nechokwadi chekudzikama uye kuomarara Conveyors vanoshandisa cheni ichifambisa system iyo ine anti-kukweshesana rabha griping mapedhi ane yakasimbiswa jira simbi bone. Ichi chivimbo chinovimbisa girazi inofamba zvakanaka. Iyo yekushanda chaiyo yakakwira. Kushanda kumhanya kunochinjika kuburikidza nekumhanyisa regulator.
9 mota girazi beveling muchina ABB mota yakaderera mutengo
Muchina uyu wakagadzirirwa kugadzira bevel kumucheto, nechepazasi kumucheto kukuya. Iwo anotakura mapedhi anoshandisa akasimbisa simbi machira, ayo anorapwa pasi peakasarudzika maitiro uye ane akakwirira kuomarara. Girazi transmittance rakatsetseka kwazvo. Chokurukisa vari zvakananga rinosundwa dzakakwirira nemazvo ABB injini. Iyo yekumhanyisa kumhanya inochinjika neisina nhanho mutongi. Kukora kwegirazi uye nekumhanyisa kumhanya zvinoratidzwa pakuverenga kwedhijitari. Muchina uyu unoratidzwa nekushanda kwakanyanya uye nemazvo mashandiro ari nyore uye mutengo wakaderera.
10 mota girazi beveling muchina ABB mota PLC yekudzora yekubata skrini
Muchina uyu wakagadzirirwa kukuya / kupukuta bevel kumucheto, iine pasi kumucheto kukuya.
Conveyors vanoshandisa cheni ichiendesa system iyo ine anti-kukweshesana rabha kubata mapads ane yakasimbiswa jira simbi bone. Ichi chivimbo chinovimbisa girazi inofamba zvakanaka. Iyo yekushanda chaiyo yakakwira.
Kushanda kumhanya kunochinjika nedanho risina danho, iro rinopa rakasiyanasiyana sarudzo yekumhanya.
Chokurukisa anotyairwa dzakakwirira nemazvo ABB Motors.
Muchina uyu uri nyore kushanda uye une basa rakanaka.
10 mota girazi beveling muchina ABB mota yakaderera mutengo
11 mota PLC girazi beveler inonyanya kufarirwa muChina
Muchina uyu wakagadzirirwa kugadzira bevel kumucheto, nechepazasi kumucheto kukuya. Muchina unotora PLC kudzora uye opareta interface. Yese data inogona kuiswa kuburikidza nekushanda paneli. Iwo anotakura anoshandisa mapfupi-akabatanidzwa mahombe roller roller system. Kukuya spindles kunoitiswa chaiko neepamusoro chaiyo ABB mota. Muchina uyu une yakakwira automatization. Iyo inoratidzirwa neakanyanya kushanda uye nemazvo, kugadzikana mhando, nyore kushanda uye kwakaderera kupfeka.